Madowga asaliga ah ee Aasiya: ka hor duulaanka iyo hirarka hijrada ee reeraha Han qiyaastii 1600 kahor qarnigii Gregori, dadkii ugu horreeyay ee loo yaqaan maanta Shiinaha, waxay ahaayeen madow wuxuu ka yimid Afrika 100 sano ka hor wuxuuna gebi ahaanba xukumayey gobolka qarniyo ka hor
Waxaa isla markaa raacay koox kale oo asal ahaan asal ahaan ka soo jeeda Afrika, qaybna ka ah Austronesians, kuwaas oo soo marey jasiiraddii Malaysiya oo sida wacyi-gal ah loogu yeedhay "Dadka Madowga ah" ama "Nigritos" ee soo duulayaasha. Isbaanish oo markii ugu horeysay arkay, Koonfurta Aasiya iyo dhamaan Afrikaankan wali waxay ku noolaayeen Shiinaha intii lagu jiray xukunkii Qing (1645-1911).
Qiyaastii 35 oo sano ka hor, koox kale oo Afrikaan ah oo leh astaamo khaldan oo loo yaqaan "Aasiya", oo loo yaqaan Jomon, ayaa galay Japan waxayna ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee la diiwaan geliyo aadanaha ee deggen Jasiiradda Jasiiradda, oo ay ku jiraan koox kale. oo loo yaqaan 'Ainu', hiddo ahaan la mid ah kooxda dadka Madowga ah ee wali ku jira Koonfur Bari Aasiya ama koonfurta Shiinaha, Japan iyo Korea.
Dadka afrikaanka ah ee leh indhihii asalka ahaa ee la laayay ayaa ugu dambeyntii la baabi'in doonaa iyadoo faracyadii Aïnou ay weli la kulmayaan maanta cadaalad daradii ugu xumeyd iyo nacaybkii weynaa ee ka soo gaarey dadka ay ka soo jeedaan ee leh maqaar madow ama caddaalad yar.
Waqtigan xaadirka ah, tirada dhabta ah ee Auxdiyiinta Agin ee weli ku nool Japan lama yaqaan, laakiin tirooyinka rasmiga ah waxay muujinayaan inay wali jiri doonaan 25 oo ka mid ah, halka tirooyinka aan rasmiga ahayn ay sheeganayaan inay jiraan 000 oo haray.
Kongo (Afrika) waa inay ka soocdaa qaar ka mid ah "Gabdhihii & Wiilasheedii": Masiixiyiinta, Muslimka, Eurocentric, xeel-dheerayaasha, malaa'igta iyo indheer-garadka aadanaha waa inay fahmaan inuusan ku jirin Kitaabka Quduuska ah, iyo Quraanka iyo Quraanka. anteeno in aan dhisi doono Kongo ama Afrika
Jamhuuriyadeenna, Madaxweynayaashu waxay caddeeyeen: "Waxaan dagaal ugu jirnaa coronavirus" Annaga, falsafada, waxaan caddeyneynaa: "Waxaan sidoo kale dagaal kula jirnaa caajisnimada"